एमाओवादीबिनाको संविधान लेखन ः असम्भव प्रयास – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
एमाओवादीबिनाको संविधान लेखन ः असम्भव प्रयास
२०७१ माघ २६, सोमबार ०१:५५ गते
नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘जसको बिहे, उसैलाई देख्न न दे ।’ यो उखान यतिबेला संविधानसभामा देखिएको छ । बेहुलाबेहुलीबिनाको अर्थहीन विवाह उत्सवको तयारी संविधानसभाले गरिरहेको छ । कांग्रेस–एमालेलगायतका सत्ताधारी दलहरु जसरी पनि प्रक्रियामा गएर संविधान बनाई छाड्ने पक्षमा छन्, तर एमाओवादी र मधेसवादी दल यो प्रक्रियालाई सघाउन तयार छैनन् । यस्तो अर्थहीन उत्सव मनाउने तयारीले देशले निकास पाउँदैन ।
त्यसो त, संविधानसभाको बेहुला–बेहुली दुवै एमाओवादी नै हो भन्ने अर्थ होइन । तर, बेहुला वा बेहुलीमध्ये एउटाचाहिँ अवश्य हो । जसरी बेहुला–बेहुली दुवै नभै बिहेको औचित्य हुँदैन, त्यसैगरी एमाओवादीबिनाको संविधानसभाको पनि औचित्य हुँदैन । एमाओवादीबिना पनि संविधान बन्न सक्तछ भन्ने कसैलाई लाग्दछ भने योभन्दा ठूलो भ्रम वर्तमान राजनीतिमा केही हुनेछैन । त्यो भ्रमको जालो हट्न धेरै समय पनि लाग्दैन । देशलाई अहिले संविधान मात्र होइन, निकास दिने संविधान चाहिएको छ । मात्र एक थान संविधान होइन, अधिकारसम्पन्न संविधान चाहिएको छ । कसैले कसैलाई उपहार दिएको संविधान होइन कि सबैले आफैँले बनाएको अनुभूति गर्न सक्ने संविधान चाहिएको छ । यस्तो संविधान एमाओवादी र मधेसवादी दलको संलग्नताबिना सम्भव छैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतका प्रमुख दुई पक्षमध्ये एक पक्ष कांग्रेस–एमालेलगायतका दलहरु हुन् भने अर्को पक्ष एमाओवादी हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य लक्ष्य शान्ति प्रक्रियामार्फत देशमा शान्ति कायम गर्नु हो । अधिकारसम्पन्न संविधानले मात्र देशमा शान्ति र स्थायित्व ल्याउने र अधिकारसम्पन संविधानसभाले मात्र अधिकारसम्पन्न संविधान बनाउन सक्ने भएकाले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम लक्ष्य भनेकै संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने हो । संविधान बनाउने दिनसम्म शान्ति सम्झौताका दुवै पक्ष सँगसँगै हिँड्ने र सहमतिमै सबै काम गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने विस्तृत शान्ति सम्झौैता र अन्तरिम संविधानको मूल मर्म हो ।
संविधानसभा कसको एजेनडा हो ? सबैले आ–आफ्नै तर्क गरिरहेका छन् । २००७ सालको सेरोफेरोबाटै संविधानसभाको कुरा उठेकाले यो कांग्रेसको एजेन्डा हो भन्नेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगै संविधानसभाको कुरा उठेकाले यो एमाओवादीको मात्र एजेन्डा होइन, सबै कम्युनिस्टको एजेन्डा हो भन्ने तर्कहरु छन् । इतिहास जे होस् तर वर्तमान पुस्ताले बुझेको कुरा के हो भने वर्तमान संविधानसभा एमाओवादीकै एजेन्डा हो, यसको पहिलो जस एमाओवादीले पाउनुपर्छ । तत्कालीन माओवादी सशस्त्र संघर्षमा रहँदा पटकपटक सरकारसँग वार्ता गर्नेक्रममा पनि नमिल्ने एजेन्डा संविधानसभा हुन्थ्यो । माओवादी अरु एजेन्डामा लचक भए पनि संविधानसभामा लचक नभएका कारण पटकपटकका वार्ता असफल भएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीले संविधानसभाको कुरा गरिरहँदा २००६ सालदेखि नै संविधानसभाको एजेन्डा उठाइसकेको दाबी गर्ने दलहरु संविधानसभाप्रति उदासीन थिए ।
तर, यसको मतलब संविधानसभा एमाओवादीबाहेक अरुको एजेन्डा नै होइन भन्न खोजेको होइन । अन्य दल सहमत नभएका भए पक्कै पनि तत्कालीन माओवादीले उठान गरेको संविधानसभाको एजेन्डाले सार्थकता पाउने थिएन । माओवादीको उठान र अन्य दलको त्यसमा समर्थनको परिणाम बाह्र बुँदे समझदारी भयो । देश शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश ग¥यो । संविधानसभा बन्यो । देशमा गणतन्त्र आयो । तर, सबैको सहकार्यमा मात्र यो परिवर्तन हुन सकेको वस्तुगत यथार्थलाई सबै दलले बुझ्न नसक्दा फेरि संविधान बन्न सकिरहेको छैन, जुन शान्ति प्रक्रियाको लक्ष्य थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वरत एमाओ–वादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनकै लागि बाह्र बुँदे समझदारीदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संविधानसभासम्मको यात्रा लक्ष्य तय गरिएको हो । मधेस आन्दोलनपश्चात् मधेसवादी दलहरुलाई समेत सँगै लिएर हिँड्ने सहमति भएको हो । सहमतिबमोजिम दलहरुबीच सँगै हिँड्ने यात्रा सुरू त भयो, तर गन्तव्यमा पुगिएको छैन । त्यो गन्तव्यमा पुग्न एक दललाई अर्को दलको साथ चाहिन्छ । ढुंगाको भर माटो, माटोको भर ढुंगो भएर दलहरु सँगै हिँड्नुपर्छ । सबै साथसाथै गए अवश्य पुगिन्छ, एक्लै गए भन्न सकिन्न । त्यसैले, यतिबेला दलहरुको यात्रा कुनै पनि अर्थमा र तर्कमा टुट्नु हुँदैन । देशले अझै पनि सहमतिको अपेक्षा गरिरहेकोे छ, धु्रवीकरणको होइन ।
पहिलो संविधानसभाको परिणामपश्चात् एमाओवादीलाई अब कांग्रेस–एमालेको जमाना गयो भन्ने भ्रम थियो । दोस्रो संविधानसभाले एमाओवादीको त्यो भ्रमलाई चिरिदियो । दोस्रो संविधान–सभापश्चात् अहिले सत्ताधारी कांग्रेस–एमालेलाई फेरि एमाओवादी सकियो भन्ने भ्रम परेको छ । माओवादी अब केही पनि होइन भन्ने भ्रमले गर्दा नै सत्ताधारी दलहरु एमाओवादीबिना पनि संविधान बन्छ भन्ने भ्रमजालमा परेका छन् । सत्ताधारीले यस्तो अर्घेल्याइँ गर्ने हो भने भोलि कांग्रेस–एमालेलाई पनि हिजो एमाओवादीलाई सवक सिकाएझैँ जनताले सवक सिकाउँछन् । किनकि, कुन दल ठूलो र कुन दल सानो भन्ने निर्णय गर्ने न्यायाधीश भनेका जनता हुन्, दलहरु आफैँ होइनन् ।
राजनीतिमा उतारचढाव भैरहन्छ । जब राजनीतिमा चुनावलाई स्वीकारिन्छ, तब कहिले कुन दल ठूलो त कहिले कुन ठूलो भैरहन्छ । त्यसैले, आज एमाओवादी सानो दल हुन पुग्यो भन्दैमा ऊबिना नै संविधान बनाउँछु भन्ने कसरत ठूला दलले गर्नुहुँदैन । सत्ताले विपक्षीलाई कहिल्यै पनि कम आँक्नु हुँदैन । जनता सत्तासँग मात्र होइन, विपक्षीसँग पनि छन् भन्ने कटु यथार्थलाई बुझ्दै बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने निरर्थक प्रयास तत्काल रोक्नुपर्छ । निरर्थक कसरतले सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन, मात्र द्वन्द्व ल्याउँछ ।
जति प्रयास गरे पनि शतप्रतिशत सहमति गर्न सकिँदैन । त्यसैले, बहुमतबाटै संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क सत्तापक्षीय दलहरुको सुन्न पाइन्छ । प्राविधिक रुपमा मात्र बुझ्दा तर्क सही हो । तर, राजनीति प्राविधिक र कानुनी विषय मात्र होइन । एमाओवादी संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा र अरु साना दल सहभागी नहुँदा कानुनी स्थिति एउटै होला, तर राजनीतिक स्थिति एउटै हुँदैन । एमाओवादी संविधानसभाको एजेन्डा उठान गर्ने पार्टी हो, अरुको एजेन्डामा पछि लागेर संविधानसभामा आएको होइन । राजनीतिमा कानुनी म्यान्डेटभन्दा आन्दोलनको म्यान्डेट जहिले पनि माथि हुन्छ । कानुनमा टेकेर आन्दोलन हुँदैन । आन्दोलन नभै परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले, कानुनमाथि माथिल्लो आन्दोलनका म्यान्डेटलाई संस्थागत गर्ने काम विशुद्ध कानुनमा टेकेर गर्न सकिँदैन । यसकारण, एमाओवादीबिना विधान बन्दैन ।
संविधान देश र जनताका लागि हो, दलका लागि होइन । संविधान कोही कसैका लागि होइन, तर सबैका लागि हो । सबैका लागि संविधान हो भने सबैको सहभागिता हुनुपर्दछ । दुई तिहाईले संविधान बनाउँदा दुई तिहाई जनताको मात्र भावना समेटिन्छ । बाँकी एक तिहाई जनताको भावना संविधानमा समेटिँदैन । त्यसैले, एक तिहाई सभासद् संविधान निर्माण प्रक्रियामा बाहिर पर्नु वा अल्पमतमा पर्नु भनेको ती सभासद्लाई मतदान गर्ने एक तिहाई जनता पनि बाहिर पर्नु हो । एक तिहाई जनतालाई बाहिर राखेर कस्तो संविधान बन्ला ?
हिजो पनि संविधान थिए, तर ती संविधानलाई सबैले आफ्नोपनको महसुस गर्न सकेनन् । अबको संविधान सबैले आफ्नो भन्ने महसुस गर्ने हुनुपर्दछ । तर, प्रक्रियाका नाममा एक तिहाईको सहमतिबिना संविधान बन्छ भने त्यो संविधानमा एक तिहाई जनताले आफ्नोपनको महसुस
गर्दैनन् । जब संविधान एक तिहाई जनताले मनबाट अस्वीकार गर्छन् भने त्यो संविधान प्राविधिक रुपमा त देशको संविधान बन्ला, कानुनी दस्तावेज पनि होला तर भावनात्मक सम्पत्ति बन्दैन । त्यस्तो प्राविधिक संविधानले सम्मान पनि पाउँदैन । सबैले मेरो संविधान भन्ने अनुभूति नगरेको संविधान बनेर पनि अर्थ छैन ।
यसको अर्थ यो होइन कि मधेसवादी वा एमाओवादीका सबै एजेन्डा सही छन् । कुरा यो पनि होइन कि एमाओवादीले भनेकै हुनुपर्छ । हो, एमाओवादी आफ्ना एजेन्डामा थप लचक हुनैपर्छ । सत्ताधारी दलले पनि आफू पनि थप लचक हुने र एमाओवादीलाई पनि थप लचकताको लागि आग्रह गर्नैपर्छ । तर, एमाओवादी र मधेसवादीबिना जबर्जस्ती संविधान बनाउने काम सत्तापक्षले कदापि गर्नुहुँदैन । जबर्जस्ती संविधान बनाउन खोजे त्यो आत्मघाती हुन्छ ।